Ọnwụ Na-agba Anyị Ka Akpị: Ọ Bụrụ na Mmadụ Anwụọ, nke Ya Ọ̀ Gaala?
Ọtụtụ ndị anaghị achọ ikwu gbasara ọnwụ n’ihi na okwu gbasara ọnwụ na-eme ha obi ọjọọ. Ma hà chọrọ ikwu gbasara ya ma ọ bụ na ha achọghị, ọnwụ na-akpa anyị niile aka ọjọọ. Ọ na-agba anyị ka akpị.
E nweghị onye obi na-adị mma ma ọ nụ na papa ya ma ọ bụ mama ya ma ọ bụ nwa ya nwụrụ. Ọnwụ nwere ike igbu mmadụ mgbe a na-atụghị anya ya. Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ ọnwụ gbuchaa otu onye, ya egbuo onye ọzọ, ya gbuchaa onye nke ahụ, ya egbuokwa onye ọzọ. Ma ò gburu otu onye ma ò gburu ọtụtụ ndị, ihe ọ na-akpatara anyị bụ obi mgbawa.
Otu nwoke aha ya bụ Antonio kwuru otú obi dị ya mgbe nna ya nwụrụ n’ihe mberede okporo ụzọ. Ọ sịrị: “Ọ dị m ka ebe mmadụ gara kpọchie ọnụ ụzọ ụlọ m ma chịrị mkpịsị ugodi ụlọ m gbafuo. O nwekwaghị otú m ga-esi banye n’ụlọ m ọzọ. Naanị ihe m nwere ike ime bụ ịna-echeta na o nwere mgbe m bibu na ya. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị m ka ọ nwụbeghị, ma o nweghịzi ihe m ga-emeli. Ihe mere eme emeela.”
Otu nwaanyị aha ya bụ Dorothy nwekwara ụdị nsogbu ahụ. Di Dorothy nwụrụ mgbe Dorothy dị afọ iri anọ na asaa. Dorothy kpebiri na ya ga-amata ihe ụfọdụ na-agbagwoju ya anya gbasara ndị nwụrụ anwụ. Ebe ọ bụ na Dorothy na-akụziri ụmụaka ihe na Sọnde skul, o kwetaghị na mmadụ nwụọ, ya abụrụ na nke ya agaala. Ma, ọ maghị ihe na-eme ndị mmadụ ma ha nwụọ. N’ihi ya, ọ jụrụ pastọ ha, sị, “Gịnị na-eme mmadụ ma ọ nwụọ?” Pastọ ahụ zara ya, sị: “O nweghị onye ma. Ka anyị lewenụ anya mara ma ànyị ga-emecha mata.”
Ma, ọ̀ bụ eziokwu na anyị ga-elewe naanị n’anya n’anya, ya bụ, na o nweghị otú anyị ga-esi amata ihe na-eme mmadụ ma ọ nwụọ? Ò nwere otú anyị nwere ike isi mata ma ọ̀ na-abụ mmadụ nwụọ, ya abụrụ na nke ya agaala?
O teela ndị mmadụ chọwara ihe ha ga-eme ka ha ghara ịnwụ anwụ. Ò nwere mgbe ụmụ mmadụ ga-akwụsị ịnwụ anwụ?